Pakistan: Fangatahana fandraràna ilay diabe malaza ataon’ny vehivavy entina manampim-bava ny feminista · Global Voices teny Malagasy
'Tsy tokony ampiharina amin'ny fahalalahana maneho hevitra ny famerana'
Voadika ny 22 Aogositra 2021 4:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Nederlands, Español, عربي, Italiano, English
(Lahatsoratra tamin'ny marsa 2020)
Afisy “Diabe Aurat” 2020. Sary avy amin'i Shehzil Malik. CC BY-NC-ND 4.0
Ankalazaina manerantany isaky ny 8 Martsa ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy (IWD) hanasongadinana ny zon'ny vehivavy amin'ny fanaovana hetsika. Tany Pakistan, nanjary nalaza ny fankalazana nanomboka ny taona 2018, raha nikarakara diabe tamina tanàna miisa telo samy hafa ny sehatra iray an'ny fikambanana feminista Pakistaney antsoina hoe Hum Auratien – Izahay vehivavy amin'ny fiteny Urdu. Tamin'ny taona 2019, nahavita nanao diabe tamina tanàna hafa nanerana an'i Pakistan izy ireo.
Tamin'ity taona (2020) ity anefa, dia miatrika fanamby ny Hum Auratien satria nisy ny fangatahana napetraky ny mpisolovava Mohammad Azhar Siddique, tao amin'ny Fitsarana Avo ao Lahore ny alatsinainy 24 Febroary 2020, mangataka ny fandrarana maharitra ilay diabe izay heverina ho “fanoherana ny fanjakana” sy “tsy Islamika.”
Inona moa ny Diabe Aurat?
Tamin'ny 5 Martsa 2018, vondrona feminista sy fikambanam-piarahamonina – indrindra ny Fikambanana Feminista, Fikambanan'ny Vehivavy ary ny Zazavavy ao Dhabas – no niray hina tamin'ny Hum Auratien ary nanambara fa hisy ny “Diabe Aurat” na ny “Diaben'ny Vehivavy” amin'ny 8 Martsa ao Karachi, Lahore, ary Islamabad, hitakiana ny rariny ara-toekarena, ara-pananahana ary ara-tontolo iainana ho an'ny vehivavy.
Vakio bebe kokoa: Nanamarika Ny Fanoherana Ny Fankahalana Vehivavy Tany Pakistana Ny Diabe Aurat (Diaben'ny Vehivavy)
Afisy diabe Aurat 2020, Sarin'i Shehzil Malik. CC BY-NC-ND 4.0
Tao anatin'ny roa taona, nivory nanerana an'i Pakistan ny vehivavy mba hanasongadinana ny olan'ny vehivavy ary hitakiana ny fitovian-jo ho an'izy ireo. Nanao diabe tany amin'ny tanàndehibe izy ireo izay nandraisan'ny vehivavy sy zazavavy ary ihany koa ny lehilahy amin'ny sokajin-taona rehetra anjara. Nitazona sy nampiseho afisy misy hafatra manameloka ny fanjakazakan'ny ray (lehilahy) ireo mpanao diabe.
Read more: Aurat March breaks barriers against patriarchy in Pakistan
Ny diabe Aurat ao Pakistan dia manana manifesto miresaka momba ny fiombonana ho an'ny vehivavy feminista, olona niova fananahana, olona sady tsy lahy no tsy vavy ary ireo vitsy an'isa ara-pananahana izay manohitra ny rafitra patriarka mitarika amin'ny fanararaotana ny vehivavy ara-nofo, ara-toekarena ary ara-drafitra.
‘Tsy azo fehezina ny fahalalahana maneho hevitra’
Nanaiky ny fangatahana nataon'i Siddique ny fitsarana, izay nilaza fa tokony “hanaiky sy hankasitraka ny vehivavy noho ny zava-bitany ary ihany koa [haneho] firaisankina… fa tsy hihoatra ny fetra rehetra na hitsikera sy hanararaotra ireo lehilahy” ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Vehivavy.
Nilaza ihany koa izy tao anatin'ilay fangatahana fa “fitarihana diso làlana ary fikasana tsy mahomby amin'ny famoahana olana goavana atrehan'ny vehivavy mahazatra” ny Diabe Aurat, satria “misy hatrany ny hafatra manafintohina amin'ny alàlan'ny sora-baventy.” Ny fanangonan-tsonia koa dia nilaza fa “antoko manohitra ny fanjakana isankarazany [no] mamatsy ara-bola an'ity antsoina hoe ‘Diabe Aurat’ ity miaraka amin'ny tanjona tokana hanaparitahana ny baranahiny eo amin'ny vahoaka. Ahitana ny fanaparitahana ny baranahiny, ny tsy fahamaotinana, ny fitenenan-dratsy ary ny fankahalana ny fenitry ny Islamo mihitsy” ny fandaharam-potoanan'izy ireo miafina.
TSY MISY SIVANA | Nanazava ny antony nametrahany ny fangatahana manohitra ny Diabe @Aurat tao amin'ny Fitsarana Avo ao Lahore ny filohan'ny vaomieran'ny fikatrohana ara-pitsarana, @AzharSiddique.
Niatrika tsikera indray ny Diabe Aurat tao amin'ny tambajotra sosialy. Mpisera marobe no nankalaza rehefa napetraka tao amin'ny LHC ny fangatahana:
Vaovao tsara ity !!
Mihoatra ny fanoherana ny fanjakana, manohitra ny Islamo izy ireo!
Amin'ny maha firenena Miozolomana antsika dia tsy maintsy raràna ny diabe sy fanentanana rehetra manohitra ny Miozolomana!
Deraina izay nametraka ny fangatahana mba hampitsaharana izany tsy fahamaotinana izany! Tsara izay!!
Rarao ny Diabe Aurat
Nanameloka ny tsikera ireo mpanohana ny Diabe Aurat ary nilaza fa zo ara-demokratika ny fanaovana hetsi-panoherana am-pilaminana:
“Fa naninona no tsy nanda ilay fangatahana ny LHC? Tsy mahery setra izahay, tsy nanao zavatra tsy ara-dalàna, mitaky fotsiny ny zon'ireo izay efa nampanantenain'ny lalàmpanorenana taminay”, hoy @shmyla namaly ny fangatahana napetraka tao amin'ny LHC manohitra ny diabe aurat.
Isaky ny mieritreritra aho fa takatro ny maha-marefo ny toetran-dehilahy dia toa nahazo fanabeazana indray ny tenako. Milaza izany ny fametrahana ny fangatahana tany amin'ny fitsarana avo mba hanakanana ny diabe Aurat 2020 tsy hitranga.
Tamin'ny valim-pitsarana tamin'ny fangatahana ny 27 Febroary dia nilaza ny Lehiben'ny Fitsarana Avo ao Lahore, Mamoon Rashid Sheikh, fa “tsy ampiharina amin'ny fahalalahana maneho hevitra ny famerana,” araka ny tatitra nataon'ny fampitam-baovao Dawn.
Natrehan'ny mpisolovava sy ny mpikatroka mpiaro ny zon'olombelona ny fitsarana, tao ihany koa ilay mpisolovava ambony sy ilay mpikatroka ny zon'olombelona Hina Jillani. Namaly ireo fanontaniana isankarazany izy ary niaro ny Diabe Aurat. Nangataka ny roa tonta ny mpitsara hametraka ny valin-tenin'izy ireo amin'ny fotoam-pitsarana manaraka ary nanontany ny sampan-draharahan'ny fiarovana sy ny fiarahamonim-pirenena mba hanombanana ny fandaminana sy ny fandrahonana mety hitranga.
Nilaza i Jilani, raha nitafa tamin'ny fampitam-baovao taorian'ny fitsarana hoe :
Mampianatra ny dikan'ny hoe fahamendrehana i Hina Jilani
Raha ny fahamaotinana no resahina dia mahay kokoa noho ireo izay nametraka ny fangatahana izahay. Nianatra izany tamin'ny ray aman-dreninay izahay; tsy ireo olona ireo no hampianatra anay momba ny soatoavinay; fantatray ny momba ny soatoavinay ara-piarahamonina. Olona ratsy fisainana fotsiny mitady ny faharatsiana amin'ny zava-drehetra ireo.
Norahonan'ireo antoko politika ara-pivavahana ny mpikarakara ny Diabe Aurat tao Sukkur, Sindh, izay nomelohin'ny andiany Karachi tamin'ny Diabe Aurat.
Nilaza tamin'ny hafatra an-dahatsary ny filohan'ny Jamiat Ulema-e-Islam (F) (JUI-F) Sindh Maulana Rashid Mehmood Soomro fa mikendry ny fanaparitahana ny tsy fahamaotinana sy ny fitanjahana ny Diabe Aurat. Nilaza ihany koa izy fa nanohana ny zo omen'ny finoana Islamo ho an'ny vehivavy ny JUI-F, saingy tsy manaiky ny teny filamatra toy ny hoe “Mera Jism Meri Marzi” (“Ny vatako, ny safidiko”).
Nandritra ny kabary nataony tamin'ny fivoriam-bahoaka tany Karachi, Sindh, ny 29 Febroary 2020 dia nanentana ireo mpiasan'ny antoko i Maulana Fazlur Rehman mba hanao izay tsy hisian'ny Diabe Aurat:
Na aiza na aiza no ahitanareo manao izany dia angataho ny mpitandro ny filaminana hanakana azy ireo, fa miomàna amin'izay sorona rehetra raha manome fiarovana ny hetsi-panoherana toy izany ny manampahefana. Tsy azontsika atao ny mandoto ny anaran'ny fivavahana sy ny soatoavintsika ara-kolotsaina.
Vao haingana, nisy vehivavy iray antsoina hoe Rubina Jatioi nanao fangatahana tany amin'ny Fitsarana Avo tao Sindh ny 28 Febroary 2020, hanohitra ireo teny filamatra tao amin'ny Diabe Aurat. Nolazainy tao amin'ny fangatahana fa tokony ho rarana ny “teny filamatra maneho fitondran-tena maloto” amin'ny diabe ary “tsy manampy ny vehivavy hahazo zo na inona na inona ny Diabe Aurat”. Na dia nilaza aza ny SHC fa tsy misy antony marim-pototra hametrahany fangatahana satria tsy manana antontan-taratasy hanohanana ny fitakiany izy dia nangatahana izy ho vonona ho tonga amin'ny fotoam- pitsarana manaraka.
Rehefa nanakaiky ny andron'ny diabe 2020, nitodika tany amin'ny Fitsarana Avo ao Lahore ny mason'ny rehetra amin'ny fanapahan-kevitra momba ny mampamari-pototra ny fangatahana – hijerena hoe manohana ny zon'ny vehivavy amin'ny fanaovana fihetsiketsehana am-pilaminana ve ny lalàna sa milefitra manoloana ny rafitra izay mampiaka-peo azy ireo.